Global Voices teny Malagasy » SARIPIKA: Toeram-pahatsiarovana 5 Ao Santiago, Chile · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Desambra 2013 12:51 GMT 1	 · Mpanoratra Silvia Viñas Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tantara, Zon'olombelona
Tao amin'ny bilaogy Memory in Latin America (Fahatsiarovana ao Amerika Latina) , namoaka andiàn-dahatsoratra momba ireo “toeram-pahatsiarovana” ao Santiago, renivohitr'i Shily i Lillie Langtry. Ireo toerana ireo dia Fanorenana lehibe na toerana misy ifandraisany tamin'ny fanonganam-panjakana miaramila  izay naha-voahongana ny filoha sosialista Salvador Allende  tamin'ny 11 septambra 1973, sy ny didy jadona 17 taona notarihan'i Augusto Pinochet . Manamarika ny faha-40 taonan'ny fanonganam-panjakana miaramila ity taona ity.
Manomboka amin'ny Mozean'ny Fahatsiarovana sy ny Zon'Olombelona [espaniola] ity fitsidihana virtoaly ity, “toerana midadasika sy manintona”, araka ny fanazavan'i  Lillie:
Azonao jerena ao amin'ny Flickr  ireo sary maro hafa momba ny mozea (anisan'izany ireo sasany avy ao anatiny).
Tamin'ny lahatsoratra hafa, nanoratra momba ny foibe famonjàna sy fampijaliana taloha antsoina hoe Londres 38  i Lillie:
Nampiasain'ny DINA (polisin'ny fitsikilovana) ho foibem-pampijaliana sy fanagadrana ireo mpanohitra ny fitondrana, ka farafahakeliiny 98 tamin'izy ireo no namoy ny ainy tao na taoriana kely  [es]. Eo anoloan'ny tranobe, miraikitra eo amin'ny rindrim-bato (mitovy amin'ny Stolpersteine  ao Alemaina) ny anaran'ireo niharany.
Namoaka lahatsoratra momba ny lapam-panjakana shiliana , izay voadaroka baomba  nandritra ny fanonganam-panjakana tamin'ny 11 septambra 1973 ihany koa i Lillie.
Tsidiho ny bilaogin'i  Lillie raha te-hamaky lahatsoratra bebe kokoa momba ny tsiaro sy ny zon'olombelona ao Amerika Latina. Azonao atao ihany koa ny manaraka azy ao amin'ny Twitter:@Lillie_Langtry. 
Farany, tianay ny manampy toeram-pahatsiarovana iray fanampiny ao Santiago: ny Kianjam-pirenena  (Estadio Nacional amin'ny teny espaniola), nampiasaina ho foibem-pigadrana sy fampijaliana.
Araka ny fanazavan'i Pascale Bonnefoy  tao amin'ny Global Post , “Ny tombatombana amin'ny fitambaran'ny isan'ireo gadra dia 7 000 hatramin'ny 20 000, ka 1 000 eo ho eo ny vehivavy. […] Ny toerana nanaovana fampijaliana dia teo amin'ny toeram-pihazakazahana am-bisikileta, tao amin'ny biraom-panjakana, teny amin'ny lalantsara ary teny amin'ny kianja. Tsy misy tarehimarika raikitra mikasika izay isan'ny olona novonoina na nanjavona tao amin'ity kianjabe ity.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/09/55247/
 Memory in Latin America (Fahatsiarovana ao Amerika Latina): http://memoryinlatinamerica.blogspot.com/
 fanonganam-panjakana miaramila: http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_11_septembre_1973_au_Chili
 Augusto Pinochet: http://fr.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
 Manamarika ny faha-40 taonan'ny : https://globalvoicesonline.org/2013/09/11/never-again-chileans-look-back-on-coup-40-years-on/
 Mozean'ny Fahatsiarovana sy ny Zon'Olombelona : http://www.museodelamemoria.cl/
 lapam-panjakana shiliana: http://memoryinlatinamerica.blogspot.fr/2013/11/places-of-memory-in-santiago-la-moneda.html
 voadaroka baomba: http://www.youtube.com/watch?v=IiH_LzKe2m4
 Democracities : http://democracities.com/2013/09/11/11th-september-1973-bombing-la-moneda-and-the-symbolic-destruction-of-democracy-in-chile/
 tsangambato fahatsiarovana ireo Nanjavona : http://memoryinlatinamerica.blogspot.fr/2013/12/places-of-memory-in-santiago-monument.html